कोविड–१९पछिको विश्व अर्थराजनीतिः फेरि शक्तिशाली हुँदैछ चीन !
१२ चैत्र २०७६, बुधबार १५:०३
जब धरतीमाथि मानवीय अत्याचार बढ्छ, प्रकृति आफैंले बाटो खोज्न थाल्छ। त्यसको हिसाबकिताब मिलाउँन थाल्छ। मान्छे एउटा कारक मात्रै हो। कार्य प्रकृतिले नै गर्छ। हुनत अहिलेको युग भावुकता र सम्वेदनाको युग होइन। यो विज्ञान र प्रविधिको युग हो। यहाँ तर्कभन्दा तथ्य र प्रमाणलाई बलियो मानिन्छ। तर धरतीमा जन्मेको मान्छे भित्र मुटु पनि छ। संवेदनसिलता र आँसु पनि छ। आँशुले बग्ने बाटो खोज्छ।
जुन दिन हिरोसिमा र नागासाकिमा परमाणु बम खसालियो। त्यतिबेला महान बैज्ञानिक अल्बर्ट आइस्टानले भनेका थिए ‘आधुनिक विज्ञानले मानव सभ्यतामाथि चरम बेइमानी गरेको छ।’ जुन उदेश्यबाट उनले परमाणु शक्तिको आविष्कार गरेका थिए त्यस्को ठिक बिपरित कार्यमा त्यस्को प्रयोग भएकोमा उनी अत्यन्तै दुखी र बिक्षिप्त थिए। जब विकास मानवता बिरोधी काममा खर्च हुन्छ, मानवीय प्रगति जब प्रकृतिविरुद्धमा उपयोग हुन्छ। त्यसको समुल सतह भत्काउन प्रकृति आफंै लाग्छ।
चीनबाट सुरु भएको कोरोना महामारीलाई चीनले नै किनारा लगाउने छ। कोरोनापछिको चीनको अर्थराजनीती विश्वले मान्न लायकको हुनेछ।
यदि तथ्य नै जिन्दगी थियो र भौतिकता नै सर्वश्व थियो भने किन मान्छे भित्र आँसुको दह हुन्थ्यो ? सबै कुरो तथ्य थिएन, सबै कुरो भौतिक उन्नति थिएन, सबै कुरो शासन सत्ता थिएन, सबै कुरो मोजमस्ती पनि थिएन। यदि तथ्य र भौतिकता नै सबैथोक थियो भने यो चञ्चल विश्व जगतमा कहिले पनि घाम नअस्ताउने देश ग्रेट ब्रीटेन आज किन खुम्चिएर रोपनीमा र हेक्टरमा परिणत हुन्थ्यो ?
विश्व मेरो हो भन्ने अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशलाई एउटा सामान्य कोरोना भाइरसले रुवाइरहेको छ ? शताब्दी पहिले कोहि शक्तिशाली थिए र आज अर्कै छ। भोलि अर्कै हुनेछ। शक्तिको मादमा उफ्रिनु आफैमा सक्किनु हो। मध्यपुर्वमा तेलका लागि अमेरिकाले आफ्नो जुन अहंकार प्रदर्शन गरिरहेको छ अन्तत त्यो एकदिन निस्तेज हुने छ। कोरोनाको बिश्वब्यापी महामारी सेलाउन नपाउदै चीन विश्वको शक्तिशाली देशका रूपमा परिणत हुँदैछ। चीनको गर्भ भित्र कोरोनाको अचुक औषधि निर्माण हुँदैछ। यसले विश्वलाई नै कोरोना आतंकबाट मुक्त दिलाउदै छ। विश्व बजारमा चाइनाको उपस्थितिले कायापलट ल्याउदै छ। त्यस्का तथ्यहरु विश्व सामु देखिसकेका छन् र देखिदै जानेछन्। अमेरिकाको देखावटी प्रजातन्त्र र मानवअधिकारभन्दा चीनको एक देश एक नीति र ‘कमन्युजम्यूनिज्म’ शासन ब्यावस्था धेरै प्रगतिशील छ। देखाउने डेमोक्रेसीले अब हुनेवाला केही छैन।
इतिहासकै कुरा गर्दा सन १८८७ ताका जापानले चिनमा युद्द आतंक मच्चाइरहेको थियो। चिनियाँ जनताले त्यतिबेला पाएको दुख र पीडाको बयान कुनै शब्दबाट पनि हँुदैन। त्यतिबेला जनता यसरी भोकमरीमा परेका थिए कि उनीहरूले नखाने भन्ने कुरा केही रहेन। जनताको दुख देखेर जसरी नि बाच्नुपर्छ भन्ने नीति बनायो उसले र बादरदेखि भ्यागुतासम्म चील हुचिलदेखि सर्पसम्म खान सिके चाइनिजहरुले र बाचेर देखाए।
चिनियाँ कोमिन्ताङ्गका तात्कालिक अध्यक्ष थिए च्याङकाइ सेक। उनी कमन्युस्ट बिरोधि थिए। चीनको उत्तरी भुभागमा च्याङ काइ सेकको भन्दा मावोत्सेतुङको बर्चस्व थियो।च् याङ काइ सेकलाई भने अमेरिकी समर्थन थियो। किनकि अमेरिका कम्न्युस्ट बिरोधि शासकलाइ मन पराउथ्यो। दोस्रो बिश्व युद्धपछि कोमिङताङ सरकारको पतन भयो र च्याङ्काइ सेक भागेर ताइवानको रास्ट्रपति भए त्यो चाइनाकै एक प्रान्त थियो र अहिले पनि छ।
यदि तथ्य नै जीन्दगी र भौतिकता नै सर्वश्व थियो भने किन मान्छे भित्र आँशुको दह हुन्थ्यो ?
अब माओत्सेतुङ सत्तासीन भए। चिनियाँ कम्न्युस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएपछि उनले कृषिप्रधान चीनियाँ जनतालाई व्यापक समर्थन र साथ दिए। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि साम्राज्यवादी देशहरू जर्मन फ्रान्स बेलायत अमेरिका आदि देशका समर्थनमा पनि बिरोधाभाषको स्थिति पैदा भयो। विश्व मानचित्रबाट बेलायतको सर्वोच्च शक्ति खोसिएको थियो र त्यो शक्ति अमेरिकाले लियो। आजको दिनसम्म पनि त्यो सामथ्र्य शक्ति अमेरिकीहरुसगै छ। भारतीय उपमाहाद्विपमा बेलायती कब्जा अर्थात उपनिवेश लामो समयसम्म कायम रह्यो। बेलायतको दबदबा भारत हुँदै चीनसम्म व्यापक थियो।
चाइनीजहरुमाथी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्थे बेलायतीहरु। १८४२ मा चाइनासित अफिम ब्यापार गर्न भनी पचास लाख पाउन्डमा बेलायती सरकारले हङकङ किनेको थियो। बेलायती उपनिवेशबाट हङकङ स्वतन्त्र भएको आज बीस वर्ष मात्रै भएको छ। चीनका थुप्रै व्यापारिक बन्दरगाहमा बेलायतले कब्जा जमाएको थियो। त्यसबेलाका शक्तिशाली राष्ट्र फ्रान्स जर्मन बेलायतले दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूमा आफ्नो उपनिवेश जमाएर बसेका थिए। त्यो उपनिवेशको केही गन्ध अझैसम्म पनि यो दुनियाँमा कायम नै छ।
अमेरिका मध्यपुर्वमा आफ्नो उपनिवेश कायम गर्न चाहन्छ। आफ्नो स्वार्थका लागि आतंककारी पाल्न र पोस्न पनि चाहन्छ। तर चीन मात्रै यस्तो देश हो जस्ले आतंककारीलाई कहिले भरण पोषण गरेन। इतिहासमा धेरै दुःख पाएको चीनले आज बिश्वलाई देखाइरहेको छ आफ्नो प्रगति बिना घमण्ड। चीन इतिहासकै स्वतन्त्र देश हो भलै उस्का केही भाग थोरै समयका लागि उपनिवेशमा परे पनि उसले आफ्नो अक्षुन्ड सार्वभौमसत्ता जोगाउने सामथ्र्य देखायो। आज स्वतन्त्र तिब्बत भनेर उफ्रिने तिब्बती जनताको प्रगतिका लागि चीनले आफ्नो सर्वश्व पसिना खन्याइरहेको छ।
तिब्बत चीनकै हो। आफ्नो शरीरको कुन चाहिँ अङ्ग चोइटिएर भाचिएर गएको देख्न चाहन्छ र मानिस पनि। त्यस्तै हो एउटा स्वायत्त देशले आफ्नो भूमि खोसिएको देख्न चाहदैन। तिब्बतको भलाइबाट चीन बिरोधि गतिविधि सन्चालन गर्ने दलाइ लामा भागेर भारतमा निर्वाशित छन्। भन्न त उनले आफुलाई बुद्धका अनुयायी या अवतार भनेका छन् तर उनी बिल्कुलै राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् त्यो पनि अमेरिकाको। बुद्धकाअनुयायीले राजनीति गर्दैनन्। बुद्धले राजनीति गरेका थिएनन्। राजनीति गर्नुपर्छ भनेर नै दरबार त्याग्ने बुद्धले राजनीतिलाई भन्दा शान्तिलाई समर्थन गरेका थिए।
चीन राजनीति कम काम ९ विकास ज्यादा गर्ने देश हो। अमेरिका काम कम तर राजनीति ज्यादा गर्ने देश हो। अबको संसार उत्पादन र बितरण अनि सेवामा विश्वास राख्छ। चीनले यहि नीति लिएको छ। कोरोनाको भाइरसलाई लिएर चीन र अमेरिका बिच अहिले वैमनस्यता वाकयुद्द कायम भएको छ। ट्रम्पले भने जस्तो कोरोना भाइरस चीनको हो भनेर कसरी भन्नू। किनभने रोग यसको र त्यसको भन्ने हुँदैन। कोरोनाकै कारण अब चाइनाले प्रगतिको त्यो चुचुरो छुदै छ। जहाँ यो विश्व कोहि पुग्ने सामथ्र्य राख्न सक्तैन।
नेपालको लागि चाइना छिमेकी देश हो। हाम्रो भूमि चीनसँग जोडिएको छ। भनिन्छ ‘टाढाको देवता करसाको भुत’। चीन हामीसगै छ। हाम्रो दुःखमा चाइना दुःखी हुन्छ। उ कहिले रमाउन जान्दैन। अमेरिकाले थुप्रै नेपालीहरुलाई शरणार्थीका रूपमा पाले पनि हामी उस्लाई नजिक राख्न सक्तैनौ भूगोलको हिसाबले पनि। दुई विशाल देश भारत र चीनको बिचमा हामी सार्वभौम बाचिरहेका छौ। जसरी काडामा फुल्छ फूल र सुरक्षित रमाउछ पनि। अमेरिकाको माया भन्दा चीनको छायां नै हामीलाई प्यारो लाग्छ। त्यो छायांले हाम्रो दुखको झरिमा कमसेकम ओत त दिन्छ।
आज विश्वले कोरोना भाइरसको भयावह महामारी खेपिरहेको छ।
तेस्रो विश्वयुद्ध जैविक हतियारबाट सुरु हुने भाविस्यबाणी गरेको थियो हिजोको बिज्ञानले। कतै त्यही परिस्थितिमा पुग्ने त होइन यो विश्व भन्ने संशय उब्जिन थालेको छ। चीनबाट सुरु भएको यो महामारीलाई चीनले नै किनारा लगाउने छ। काेराेनापछिको चीनको अर्थराजनीती विश्वले मान्न लायकको हुनेछ।
कोरोनाको अक्रान्त भयावह छिटै अन्त हुनेवाला छैन। अब यस्ले बिस्तारै राजनीतिक रुप धारण गर्ने छ। यो उत्पत्तिको देश चाइनालाई नै यसको निर्मुल पार्नुपर्ने बाध्यता छ। यसकै कारणले पनि चाइना विश्वको हिरो हुने छ। भलै उसले सोचेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर २०२० मा नपुग्ला तर २०२१ पछि विश्व अर्थ ब्यावस्थामा चाइनाले विशाल फड्को मार्नेछ। किनभने हिजोको दुःख र भोकमरी देखेको छ उसले र उसलाई इतिहासले पनि ब्यापक सिकाएको छ। चाइना रातारात प्रगतितर्फ लम्किरहेको छ। हाम्रो पनि व्यापक समर्थन छ चीनलाई। उस्को प्रगतिबाट हामीले पनि सिकिरहेका छौ। सिकिरहनुपर्छ।
‘कोरोना भन्दा ‘राता मण्डले’को बढी डर!’
प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्रः ‘टुक्कै सहि केही त बोल्नोस् न!’
६० नाघेका वृद्धवृद्धा र दीर्घराेगीमा काेराेनाभाइरस सर्न नदिन के गर्न सकिन्छ?
सरकारले मष्तिस्कका चार ढोका खोलेर सोच्नुपर्छ, हाम्रो एक लाख प्रतिशत सहयोग रहन्छ
कोरोना त्रासदी, अबको आर्थिक समृद्धि गाउँबाट
गुणस्तरहीन सामानको आशंका गर्नेले परीक्षण गरे हुन्छः स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल ( भिडियो अन्तर्वार्ता सहित)